Gabalka Jarar oo Ciidamada ugu Badan ee Kilalka Laga Qorayo – Rasaasa News
Dhagaxbuur – Ogadeeniya [ May 26, 2009], Waraka ka imanaya dhulka Ogadeeniya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada uu Kilalku qoranayo kuwooda ugu badani ay ka imanayaan Gabalka Jarar.
Tan iyo intii ay dhaceen weerardii Jaha wareerka ahaa ee uu Jwxo-shiil ku qaaday Jabhada u dagaalama xoreynta dhulka Ogadeeniya dagaaladaasi oo ay ku nafwaayeen dhalinyaro qaali ah oo aan wax dambi ah ka galin shacabka Somalida Ogadeeniya, balse isu taagay in ay difaacaan shacabka Ogadeeniya. Waxaa kale oo uu Jwxo-shiil dagaal kala horyimid rag aad qaali ugu ahaa shacabka iyo halgankaba.Dhacdooynkaas foosha xun ka dib ayey kol kaliya shacabku yidhaahdeen magca bilaash ma baxo ileen bilaash Jwxo-shiil looma odhanin.
Jwxo-shiil kolkii uu dhibaatada gaystay waa la waayey meel alaale meel uu galay, waxaana duurka lagu laayey rag badan oo isaga ay isla socdeen, laakiin uu isagu ka socday. Waxaa bilaabatay in ay isa soo dhiibaan dhalin yaro badan oo ahaa ragii hormuudka ka ahaa halganka, waxayna ciidamada gumaysigu bilaabeen in ay dib uga faa,iidaystaan oo ay mushaar u qoraan. Waxaa hal mar kaliya shiiqay halgankii soo socday sodonka sano, balaayo ilaaho ha na soo dhe galinin, indho la,aantii Jwxo-shiil ONLF soo galisay ilaahay baa ogaa sidda uu u shiili doono.
Jwxo-shiil oo aan la, ogayn meel uu jaan iyo cidhib dhigay ayey dadku u badinayaan in uu la joogo Itobiya, waxaana loogu ekaysiinayaa arintaas in ay dhab tahay sababahan;
Waxa gobolka uu ka soo jeedo looga qorayo ciidamada ugu badan gabalada ee keentay kalsoonida Intaas la, egg.
Waxaa uu is afgaran waa ka dhex taagan yahay kuwii iska daba socon jiray Jwxo-shiil, oo meel ay wax ka bilaabaan la,a si ay bulshadii u soo dhexgalaana la,a
Iyada oo KL Meles uu doonayo in uu si deg deg ah isbedl balaadhan oo maamul ugu sameeyo degaanka Somalida Ogadeeniya.
Masuuliyiinta degaanka Somalida Ogadeeniya ayaa waxay ka yaaban yihiin in uusan Awal hore Meles soo fara galin jirin degaanka Somalida ee uu u diri jiray rag ay isku dhaw yihiin xiliganse isga ayaa cid soo magacaabaya waa wax aan dhici jirin oo kilalka ku cusub.
Arimahan oo dhan kolka la isu geeyo ayaa waxay dad badani sheegayaan in ay u suurto galayso Jwxo-shiil dabinadii uu in badan soo dhigayey oo ugu dambayntiina uu soo af jaray culays badan oo saaraa xukuumada Tigray wixii lagu balamayna uu maanta miiska saaran yahay.
Laakiin tolow sidee bay ku suurtoobi in uu marna Jabhadnimo ku laayo shacabka Somalida Ogadeeniya marna uu Itobiyaan ahaan ku dhibaateeyo, waxase had iyo goorba dhacda in ayna suurto galin waxa aad ku hamidaa oo ay sida aadan doonaynin noqoto.